Kudhaa oo ciidamadda isbaheysigu la wareegeen | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Kudhaa oo ciidamadda isbaheysigu la wareegeen
Kudhaa oo ciidamadda isbaheysigu la wareegeen
Wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamadda maammulka KMG ah ee Jubaland oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ay goor dhowayd oo maanta ahayd dib u la wareegeen deegaanka Kudhaa iyo tuulooyin kale oo hoostaga deegaankaasi, iyaga oo aan wax iska caabin kala kulmin dagaalyahanka xarakada Shabaab ee Soomaaliya.
Col. Aadan Maxamed Ibraahiim ‘Goojaar’ oo ah taliyaha ciidamadda daraawiishta ee Kudhaa wax ka qabtay ayaa warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay kula wareegeen deegaankaasi, ayna sii wadayaan weerarada ka dhanka ah Shabaab si buu yiri dib gacanta maammulka loogu soo celiyo dhammaan deegaanada kale ee gobolladaasi Jubaland.
Jasiiradda Kudhaa oo saldhig muhim ah u ahayd Al-shabaab, muddana ay soo maammulayeen ayaa ka mid ah deegaanada ku teedsan dhul xeebeedka gobolkaasi J/hoose, waxayna isku xirtaa Soomaaliya iyo waddankaasi Kenya.
Sidoo kale, ciidamadda huwanta ayaa gacanta ku dhigay tuulada Cabdalla Biroole oo qiyaastii 45km galbeed kaga beegan Kismaayo, iyaga oo imminkana ku sii siqaya Buulo Xaaji iyo Jannaa Cabdalla.
Previous articleMuqdisho oo qarax khasaare geystay uu ka dhacay
Next articleMadaxweynaha oo ka horyimid isku shaandhayntii